Gudoomiyaha Degmada Borama iyo Xildhibaanada Golaha Degaanka oo ka Fuliyey olole Lagu Maaraynayo Qashinka Xaafada Sheekh Axmed Salaan maanta | lughayanews
Gudoomiyaha Degmada Borama iyo Xildhibaanada Golaha Degaanka oo ka Fuliyey olole Lagu Maaraynayo Qashinka Xaafada Sheekh Axmed Salaan maanta
Boorama-(lughaya.com)-Olole balaadhan oo maaraynta qashinka ah ayaa maanta ka qabsoomay xaafada Sh. Axmed Salaan ee magaalda Boorama. Hawlgalkan ayaa ka qayb ah qoirshayaasha maayerka cusub degmada Boorama Mudane Sulaymaan Xasan Xadi uu ku doonayo in uu kusoo celiyo bilicda magaalada Borama.
ololahani ayaa waxa ka qayb qaadanayay dadka xaafadaasi Sh. Axmed Salaan oo kaashanaya D/Hoose iyo xildhibaanada Golaha degaanka e Boorama.
Maayarka Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo isagu ugu horayn ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu balan qaaday in ay goobtan ka shaqalaysiin doonaan qof gaar ah oo qaata mushahar, waxana uu sheegay in ay muhiim tahay in la is kaashado si qashinka loo maareeyo, Maayarku waxa uu u mahad naqay xildhibaanada iyo dadka degaanaasi Sh. Axmed Salaan oo iyagu ololahan kaalin muhiim ah ka qaatay.
Dadka xaafada qaar ka mid ah ayaa waxa ay ka hadleen ahmiyada uu leeyahay ololahani waxana ay yidhaaheen “ Qashinkani dhib wayn ayuu nagu hayay maanta olole balaadhan ayaa lagu qaaday oo cagafcagafyo ayaa ka hawl galaya, waxa naga caawiyay oo mahad iska leh dawlada hoose iyo xildhibaanada, waxa aan ku faraxsanahay oo aan codsanaynaa in goobtan marka la nadiifiyo kadib ay D/Hoose u xilsaarto shaqaale gaar ah si meeshan looga ilaaliyo in qashin dambe lagu soo daadiyo.
Maayarka Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo isaguna ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu balan qaaday in ay goobtan ka shaqalaysiin doonaan qof gaar ah oo qaata mushahar, waxana uu sheegay in ay muhiim tahay in la is kaashado si qashinka loo maareeyo, Maayarku waxa uu u mahad naqay xildhibaanada iyo dadka degaanaasi Sh. Axmed Salaan oo iyagu ololahan kaalin muhiim ah ka qaatay.
« Deeqo lacageed oo la soo gaadhsiiyey dadkii waxyeeladu ka soo gaadahay baanaabixii xoraynta Saylac+SAWIRO Jabuuti: Ismacil Cumar Geele oo Xanuunkii Kusii Adkaaday, Soo Guryo Noqoshada Mucaaridka Wayn ee DAF, Xasuuqa Canfarta iyo Siliga oo Laga Talaabiyey Reer Guuraagi Jabuuti »